Mai Chibwe VekwaZimuto: Nyaya yeMhando dzevarume/vakadzi
Paita nyaya yokuti kune chatingati mhando dzezvitubu nezvombo here zvinofanira kuti zviwirirane kuti vanhu vaviri vasangana vakadanana vakwanise kugarisana pasina kushushana panyaya yokuvatana? Kune THEORY yokuti Murume nomukadzi vakaroorana vane zvinhu zviri muCATEGORY dzakasiyana havakwanisi kugarisana zvinomufaro. Ngatione siyano ingavapo
Murume ane chombo chikuru anokwanisa kuroora mukadzi ane chitubu chidiki
Murume ane chombo chidiki anokwanisa kuroora mukadzi ane chitubu chikuru
Vanotaura voti nyaya idzi dziri mbiri dzikakuwanai maroorana dzinokwanisa kukunetsai mumba nokuti zvinoita kuti umwe haaguti kana kuti umwe anogarochemedzwa nokugwadziwa. Tichida kutaura chokwadi chaicho Nyaya yakadai haina musoro zvachose.
Chokutanga ndechokuti Vakadzi siyano yavo iri pamamirire akaita pamberi pavo pakutariswa.
Umwe ane chitubu chine maromo makuru (Outer lips ) umwe ane chine madiki.
Umwe ane matinji makuru (inner lips) umwe ane madiki
Umwe ane matinji anoonekera akareba kupfuura maromo umwe ane mapfupi
Umwe anoti aita zemo onyatsonyorova umwe anononoka kunyorova.
Umwe ane bhinzi huru umwe ane diki.
Asi chaipo pachitubu panopinda chombo siyano yacho ishomanana pamhomho yese yevanhukadzi mupasi rese. Kuti usiyanepo hunge wakatoremara. Chitubu chese zvacho chinokwanisa kupindwa nechombo chese zvacho pasina dambudziko guru. Varume vasingaiti kuvata navo havaiti kumukadzi wese zvake.
Zvadaro tikatarisa SHAPE yepamberi pevakadzi vaviri tinoona yakasina mavakigwe avo, chero vachibva mumhuri imwe chete.
Varumewo tikavatarisa tinoona kuti
Umwe ane chombo chidiki chivete chokurisa chamuka
Umwe ane chikuru chivete asi chomuka chongoita saizi iyoyo futi
Umwe ane rino zidanda rinotyisa kuona
Umwe ane chombo chikuru notumabhora tudiki
Umwe ane mazibhora makuru nekachombo kadiki
Umwe ane zvese zvikuru kana zvese zvidiki.
Umwe ane chombo chipfupi chakakora
Umwe ane chombo chipfupi chitete
Umwe ane chombo chitete chirefu
Umwe ane chombo chakakora chakareba futi
Kusiyana kwevanhu uku. Musiki wevanhu akaona kuti vanhu vachasiyana siyana asi vanofanira kusangana pakuroorana vagonakigwa vese. Ndokutanga nokuudza vanhu kuti musaita Upombwe, kuti vasazokombeya varume/vakadzi. Zvadaro ndokugadzira munhukadzi ane chitubu chinotatamuka kuti chero saizi ipi zvayo yechombo murume anokwana mukati uye chinoshinya. Izvi zvakaitigwa kuti saizi yomurume kana mukadzi isava nebasa panyaya yokuvatana kunonakira mese.
Zvadaro tinoonazve kuti mavakigwe emuviri wemunhukadzi wakaitwa zvokuti anokwanisa kupinzwa chombo muchitubu nemberi kana nokumashure. Kune vakadzi vakasiyana mavakigwe avo.
Mukadzi mutete ane magaro madiki
Mukadzi mutete ane magaro makuru
mukadzi mukobvu ane magaro madiki
Mukobvu ane magaro makuru
Kozoitazve vamwe vakobvukobvu zvokuti kana kufamba anosvuuka pakati pezvidya nokuda kwekukwizirana
Mukadzi murefu mutete
mukadzi murefu mukobvu
Mukadzi mupfupi mutete
Mukadzi mupfupi mukobvu
Vanosiyanazve panyaya yemuromo wechitubu, mamirire akaita matinji nemaromo epamberi, uye bhinzi kukura kwayo nemagarire ayakaitapo. Kana woenda mukati mechitubu tafanana tese asi kana une mwero wekusimbisa masuru yechitubu unoshinya chombo kupfuura asina kusimbisa.
Chinhu chakafanana pavakadzi vese ndechokuti aka vata nomusana kana kofongora murume wake chero akadii hake pasaizi yechombo anokwanisa kumupinza chombo. Chimwezve ndechokuti mukadzi weSHAPE ipi zvayo akapinzwa chombo chesaizi ipi zvayo asina kunyorova anohwa kugwadza. Zvese izvi zvinobva pakugadzigwa kwechitubu chinotatamuka pakupinzwa chombo.
Unohwa vanhu muOFFICE vachitaura nhema kwahi
"Uyu akakora zvokuti anoda chombo chikuru"
"Uyo murefu zvokuti chombo chake chikuru saka angakuuraya"
"Uyo mudikidiki zvokuti murume angamukuvadza"
Hakuna zvakadaro Murume akareba mamita maviri akaroora mukadzi akareba mita imwe chete, vanongovata vese pasina kana chinonetsa. Chero murume wacho ane chombo chakakura sei chamira hapana nyaya inotyisa ipapo. Chombo chesaizi ipi zvayo chinokwana muchitubu chipi zvacho pasina anokuvara kana kuchemedzwa nokugwadziwa. Chero wahwisisa kuti munhukadzi anofanira kutanga anyorova.
Ukahwa murume achibvunza kuti ko angaita sei nokuti akaroora mukadzi ane chitubu chakakurisa, ari kuzama kukuudza kuti munhu asina CONFIDENCE nesaizi yechombo chake. akarambana nomukadzi iyeye mukadzi anokwanisa kuwanikwa nomurume anofunga kuti chitubu chake chidiki. Ukazoona zvombo zvavo varume vaviri ava zvimire unoona zvakainzana. Nyaya dzekukura kwechitubu dzinobva pamafungire evarume kwete pasaizi yechitubu.
Kubatwa ganyabvu RAPE nemurume ane kachombo kadiki hazvina kusiyana nokubatwa ganyabvu nomurume ane chombo chikuru. vese vanokukuvadza.
Vanhu vane ugino panya dzezvombo nezvitubu vakawandisa zvokuti nyaya dzisingafaniri kutaugwa dzinotaugwa vatereri voona sokuti ndedzechokwadi. Kune vakadzi vane zvitubu zvisingapindiki nechombo asi zvinoitiswa nechigwere chefungwa chinoti kana mukadzi akangofunga kuti chombo choda kupinda anoita PANIC inosunga chitubu murume otadza kupinda. Vakadzi vakadai vanowanikwa munyika dzese asi zvikangoitika kwedu vanokasira kufunga kuti zvaitiswa nomushonga wemunhu aakambovata naye, ipapo eye asina waakambovata naye.
Taurai tihwe vane zvokutiudzawo.
Posted by Mai E Chibwe at 10:51
zvimwe mungataure henyu mai chibwe asi kachombo kadiki hakaite,kanongoperera muzvidya murume anofanira kuonekwa nenhengo hombe kwete kanhengo kadiki nekunonoka kupedza ndiri seni zvangu zvekanhengo kadiki handidi ufanira kunzwa kuti murume arimukati akapinda kwete kadiki kanongotekenyedza.
Apo wataura kachombo kadiki hakapetseri chinhu, but ndine muvhunzi Mai Chibwe zviri normal here kuti kana baba vakakubata kabeans nemazamu unouya zviya zvokuti unopera simba, kana chombo hauchazochidi? Ndibetsereiwo.
Ndokumbirawo kubvunza kuti kana uchiti murume ari mukati, iwe woti hapana chauri kuhwa, unoziva seiko kuti murume ndiye ane chombo chidiki kana kuti mukadzi ndiye asina kusimbisa masuru yake yechitubu saka ari loose?
Inyaya isingagadziriki nokuti murume haakwanisi kukudza chombo chake. Pane mishonga inotengeswa munyika dzese asi hapana kana umwe chete unokudza chombo.
Murume akaona mukadzi anofamba zvinomisa chombo anomira chombo ofunga kuti mukadzi uyu anonaka izvo mukadzi wachoidera pakuvatana.
Mukadziwo ane mufungo wechombo chikuru akaona murume akafuta pamberi, anotanga kunyorova fungwa ichiti paita zichombo ziguru rinonaka izvo nyachombo haatombozivi kuti kunaka kunoitwa sei.
Ngatisavhenganisa nyaya yokunakigwa iri PHYSICAL ne nyaya dze PSYCHOLOGY yokunakigwa.
Kupfidziswa nekutambiswa bhinzi zviri NORMAL kuvanhukadzi vakawandisa. Ndinowanzoudza vakadzi vanonyora vachiti havasi kusvitswa pokupedzisira nevarume vavo kuti ngavadzidzse murume kutamba nebhinzi nemaoko. Adaro ukwiza bhinzi iya norurimi gwake kwenguva. Vashoma vanononoka kusvipa pokupedzisira kana zvadai. Adaro murume chero akazopinza mukadzi haakwanisi kushandisa chiuno nokurukutika.
Ndizvo ndichiti tangai mageza musati maenda kunovata, Uyezve varume ngavahwisise kuti bhinzi handichi chitubu. Chitubu chiri zasi. Kana uchikwanisa kukisa guvhu chii chinokunetsa kukisa bhinzi. Kunosiririka izasi kuchitubu.
Chinokonesa vakawanda inyaya dzokuhurirana nokufungirana zvokuhurirana. Chombo muchitubu hachinaki serurimi pabhinzi. Hazviiti.
Maita basa nekundiudza kuti handizi ndega. Pane nyaya yamakambonyora yemaBen wa balls. Ndakatonegawo angu asi maKegel balls which vibrate kana ari mukati. So far baba vari kuona improvement zasi. Muvhunzo wangu ndewekuti unozoziva sei zvakwana, or its a life time thing zvekusunga masaru.
Zvinotora nguva kusimbisa asi kuti uzive kuti zviri kuita unoti zviya murume ari mukati ukamuti KWIII anokwanisa kutadza kukoira nesipidhi yaange achiita.
Pamwe zviya wazvara mwana unoona wega kuti ukahotsira kana kukosora unozviwetera. Ukatangazve kusimbisa unoona zvomira kudaro.
Kusimbisa zvikuru pakuweta zviya zvandakati unopota uchimira woverenga wotangazve kusvika weti yapera. Hazviregwi. Ingoita kusvika wachembera asi uchazoona kuti hauzviweteri sechembere.
Pakuvatana zvinopiwa rukudzo nomurume wako. Mabhora ndeekungoti masuru ikasire kusimba.
Ko mukadzi akagara kana gore asingavate nemrume masuru dzake dzokwanisa kudzoka hre zvekuti pakuvatana unohwa kuritight
Zvinobva nokuti pakugara gore ipapo anenge achiitei pa masuru dzake. Kana ukangogara usingaiti ma EXERCISE hapana chinoitika. Unenge wakangofanana gore rese. Asi ukaita Programme yokusimbisa unosimbawo. Kuvata nomurume hakunei nokudzoka kana kusadzoka kwe masuru yechitubu. Kune varume vanofunga kuti mukadzi akapinzwa chombo zuva nezuva uye toti katatu pazuva, pane chinoitika kuchitubu kuti chinowedzera kukura kana kusashinya. Idzi inhema.
Mahure ane zvitubu zvinoshinya kupfuura vamwe vakadzi, iri ngari yokupurakitiza kuita maEXERCISE kumasuru, nokuti vanoziva kuti INCOME yavo inobva pakushinya chombo.
Zvinokwanisika kuti murume avate nehure rinovata nevarume kana 5 pazuva agofunga kuti hure iri imhandara iri nyaya yokuziva kushandisa masuru. Kugara gore kana makore mukadzi asina kupinzwa chombo hazvina zvazvinobatsira. Chinobatsira maEXERCISE ekusimbisa masuru.
Vakadzi vakawanda vemumba havahwisisi nyaya iyi. Kana ukasimbisa masuru yechitubu unonakira murume chose uye unodzidzira kukama chombo chomurume pamunoisana zvokuti mese munowedzera kunakigwa nazvo.
Kuzvara chete ndicho chinhu chinoitisa kuti chitubu chiruze masuru, asi kana wange wakasimba masuru ukazozvara mwana unokasira kudzokera kwawange uri kare nokuti unohwisisa kuti zvokusimbisa zvinoitwa sei.
Chombo chomurume upi zvake chidiki zvokuti hachikwanisi kukudza chitubu chomukadzi. Kuzvara chete ndiko kunokwanisa. Kana uri mukadzi swera zuva rese nomurume asi uchaona kuti murume ndiye anotoita dambudziko romusana.
Colly Sengeredo said...
Mai Chibwe, wangu mudzimai anochema chema nemusana,inini handitombozivi zvamuri kutaura izvo kuti musana unomborwadzi zvkuru varume.ndinototi idambudziko revakadzi.haasati atombozvara.saka zvinoitwa sei manje? Ko iko kusimbisa masuru dzechitubu kunoitwa sei?? Ndava kutomubvunzira cz iye haatorina nehanya nekutsvaga mashoko ekuvandudza bonde or smtn alike.
Ungaitesei kana murume wako achingoti 2minutes atopedza